हटिया जिपपार्कबाट एक दिनमै हरायो ! galkot fm radio
हटिया जिपपार्कबाट एक दिनमै हरायो !
घनश्याम गौतम माघ १७ ।–
गलकोट नगरपालिका वडा नम्बर ३ हटिया स्थित प्रहरीबिट नजिकै राखिएको नो पार्कीङको बोड मगंलबार राति हराएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरी चौकी हटियाका अनुसार गलकोटको सबैभन्दा चहलपहल हुने स्थान तथा पुष्पलाल मध्यपहाडि लोकमार्गमा सवारीको चापलाई ब्यबस्थापन गरि यात्रालाई सहज बनाउन ट्राफिक प्रहरीले जिपपार्क चोकमा राखेको नो पार्कीङ्को होडिङ बोड रातको समयमा हराएको छ ।
प्रहरीले जिपपार्क नजिक सबारीको चापका कारण हुनसक्ने दुर्घटनाको जोखीमलाई मध्येनजर गरि नो पार्किङको होडिङ राखेको थियो । गलकोटका सबारी पार्कङको ब्यबस्था नहुदाँ सडकमै पार्क गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको चालक बताउछन् । तर नो पार्कीङको बोड कहाँ, कसले र किन लग्यो भन्ने केही खुलेको छैन् । प्रहरीले उक्त होडिङ खोजी भैरहेको जनाएको छ ।
ट्राफिक प्रहरी पुर्णबहादुर श्रेष्ठले जिपापार्कमा राखिएको होडिङ राखेको २४ घण्टा नबित्दै हराएको जानकारि दिनुभयो । सबारी पार्क गर्न नपाउदा कसैले उक्त होडिङ लुकाएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ ।
प्रहरीले उक्त गलत कार्य गर्ने ब्यक्तिको खोजि गरि सार्बजनिक सम्पतिको चोरी सम्बन्धी कानुन बमोजिम कारवाही गरिने जनाएको छ । जिपापार्क जस्तो क्षेत्रबाट होडीङ बोड हराउनुले मानिसमा सचेतनाको अभाब रहेको पुष्टी गरको गलकोटका स्थानिय बताउछन् ।
copyit all text and ulr साभार: http://galkotfm.com/News/925